Article submitted by: Thunderbolts on 2-Dec-2013
နှမ်းလေး နဲနဲ ဖြူးခွင်.ပြုပါ ။
နောင် ညီ နှမ များတို.
မွန်ပြည်သစ် ပါတီကိုယ်စားလည် ဦးနိုင်ဟံသာ ၊ ပြောစကားတွေနဲ့ တပ်မတော် ငြိမ်းချမ်း ရေး, အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, အချုပ်အခြာအာဏာကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရဲ့ အထူး အာဏာကုန် လွှဲ အပ်ခံရသူ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြင့်စိုး စကားတွေ ကို ယှဉ်ကြည့် လေ.လာဘို. ပြောထား လို.ယှဉ်ကြည့်လေ့လာတယ် ၊ သမတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်တွေကိုလဲ ကြားပြီး ကြရောပေါ့ ၊ ကျေညက်ကြပြီလားလို.တော့ မမေးတော့ ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် ပေါ့ ။ ဟုတ်ဘူးလား ။
လူမျိုးချင်းမတူ၊ ဘာသာချင်းမတူ ။အယူဝါချင်းမတူ၊ ရည်မှန်းချက်ချင်းမတူ ၊ ဦးတည်ချက် ချင်း မတူ ယုံ ကြည် ချက်ချင်း မတူကြသူတွေဟာ ၊ သဘော တူချက် တခုရဘို.ဆိုတာ ခဲ ယဉ်းတယ် ၊ အထူးသဖြင်. လူမျိုးချင်းမတူ ဘာသာ အယူဝါဒချင်း ကွဲပြားတယ် လို.အစွဲကြီး သူတွေကြားမှာဆိုရင် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်လောက် အောင်ဘဲ ၊
ဦးနိ်ုင်ဟံသာက (“ အစိုးရ သဘောထား မမှန်၍ နိုင်ငံတ၀န်း အပစ်ရပ်ရေး “ ကျနော်တို့ကို စခန်းသစ် မဆောက်ရေး၊ တပ်သားသစ် မစုဆောင်းဖို့၊ လူစာရင်း၊ လက်နက် စာရင်းတွေ ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ နောက် လူထုဆီမှာ အကောက်အခွန်တွေ မ ကောက် ရဆိုတဲ့ ဟာတွေက ကျနော်တို့ အတွက် လက်ခံနိုင် စရာတော့ မရှိဘူး”ဆိုပြီး အစိုးရ အပေါ် အပစ် ပုံချတယ် ။ တခြားတောင်းဆိုချက် လိုလားချက်တွေကို တော့ သတင်းက ပြောထား တာ မရှီဘူး။ ဒါပေမဲ့ လဲ မသိခြင်မှ အဆုံးပါ ။
အခြား အချက်အလက်တွေ ကို ပါ တချက်ချင်း ရှင်းလင်းစွာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးက၊ ကိုယ့် စကားကို သူများပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီး သူများ စကားလုပ်တတ်တဲ့ `ဧရာဝတီ မီဒီယာကို (ကြက်တူ ရွေးက တော်တော် မယ်ဘော် ကကဲ ဆိုသလို ညည်းတို့ ဧရာဝတီက တော်တော် စိတ်ပူ နေတယ်။) လို.တိုက်ရိုက် ဘဲပြော ခဲ့ တာ တွေရတယ် ၊၊
ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်နဲ့ ပါသက်ပြီးပြောခဲ့တာမှာ ဗိုလ်ချုပ် မြင့်စိုးက (တပ်မတော် အစိတ် အပိုင်း တခု လို ကချင်ကလည်း ကချင်တပ်၊ ကရင်က လည်း ကရင်တပ်ဆိုသလို ရှိနေ လို့တော့ မရဘူး။ ကမ္ဘာမှာလည်း မရှိဘူး။ အဲဒီအတိုင်း တောင်း ဆိုနေလို့ကတော့ မရဘူး။ ဘယ်သူက သဘောတူမလဲ။ ကမ္ဘာမှာလည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ရှိတာ ပဲလေ။ မဖြစ်နိုင်တာကို တောင်းဆိုနေ ရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးက မဖြစ်ဖို့ဘဲ ရှိတာ ပေါ့။) တဲ့။ ကဲ မှတ်ကရော ။
၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံ အခြေခံကို ပြည်သူက ပြင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အသံတွေ ရှိနေ တယ် ဆိုတာနဲ့ ပါတ်သက်လို.လဲ ဗိုလ်ချုပ် မြင့်စိုးက - ( ပြည်သူတွေပြင်မယ် ဆိုတာ ဘယ်သူတွေ ပြင်ချင် သလဲ။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို သန်းပေါင်း ၆၀ မှာ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ခံထားတာလေ။ ပြင်ဆင် ချင်ရင် ပြင်ဆင်ချက်တွေ လည်း သတ်မှတ်ထားတာဖြစ် ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ မှန်မှန် ကန်ကန် လုပ် နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိတာပဲ ) တဲ့။
သမတဦးသိန်းစိန် တယောက်ကတော့ ( နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ လုပ်ဆောင် ရာ တွင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး နည်းလမ်းများ ကို ရှောင်ရှားပြီး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ရေး နည်းလမ်းများဖြင့် အဖြေရှာ လုပ် ဆောင်ရန် နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံ စဉ် ပြောကြားသည်။ လို.သိရတယ် ။
ဦးသိန်းစိန်က (ယနေ့ကာလလို ထိလွယ်ရှလွယ် အခြေအနေများ၊ မရေရာ မသေချာမှုများနဲ့ စိန်ခေါ်မှုများစွာ ရှိနေတဲ့ မိမိတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး နည်းလမ်း တွေ ကို ရှောင်ရှားပြီး ဆွေးနွေးညှိ နှိုင်း ရေး နည်းလမ်းများနဲ့ အဖြေရှာ လုပ်ဆောင်ကြဖို့လည်း ပြောကြားလိုပါတယ်") တဲ့။
ဆက်လက်ပြီး ဦးသိန်းစိန်က (ယင်းကဲ့သို့ အဖြေရှာ လုပ်ဆောင်သည့် နေရာ တွင် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုချင်း အနေနှင့်သော် လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်း အနေနှင့်သော် လည်းကောင်း လက်ရှိရရှိထားသည့် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲများ ဆက်လက်ရှင်သန်ရေး နှင့် ခိုင်မာသည့် အသွင်ကူး ပြောင်းရေးများ ပေါ်ပေါက် လာရေးဆိုသည့် ရှုမြင်မှုများကို အခြေခံသော ချဉ်းကပ်မှုများ၊ လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် ကြရန်လည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောကြားသည်။) တဲ့ ။
နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ဦးသိန်းစိန်က (အချင်းချင်းကြား ယုံကြည်မှုနည်းပါး နိမ့်ပါးနေသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း များတွင် တွေ့မြင်ရလေ့ရှိသော အားနည်း ချက်များအဖြစ် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး မှန်ကန်သည့် လုပ်ရပ် များ နှင့် ကြိုးပမ်းမှုများကို လိုရာဆွဲပုံဖော်ခြင်း၊ အစဉ် အမြဲ ရှင်သန် နေသည် ဟု လိုအပ်သည့် အယူ အဆ သစ်များ၊ အတွေးအခေါ် သစ်များကို လက်မခံ ဘဲ ရှေးရိုးကျပြီး အစွန်းမလွတ်သည့် အတွေးအခေါ် ဟောင်းများကို ကိုင်စွဲထား လေ့ရှိခြင်း၊ အထွေထွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းအား ထုတ် မှုများ၏ အားနည်း ချက်များ၊ လိုအပ်ချက်များကို အဆိုးမြင်အဖြစ် ပြောဆိုခြင်း ဆိုသည့် ရပ်တည်ချက်များ ထား ရှိခြင်း၊ အချင်းချင်း သတင်း အချက် အလက်များ မျှဝေလိုခြင်း မရှိဘဲ သတင်းထိမ်ချန်ပြီး အသာစီးရဖို့ ကြိုးစား သည့် အတွက် ပွင့်လင်းမျှတသည့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အဖြေရှာမှုများကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေခြင်းဆိုသည့် အား နည်း ချက်များဖြစ်ကြောင်း ) ပြောကြား သည်။
ဦးသိန်းစိန်က ဒီအပြင်ဘာပြောနိုင်အုံးမှာလဲ ။ သူစကားတွေကို ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုနား လည်မယ် အဓိ ပါယ် ဖေါ်ကြအုံးမယ် မသိဘူး။ သူကတော့ မကြာခင် သွားမဲ့ သူပါ ၊ နေပါအုံး ဆိုလို.တောင် မနေပါဘူး။ လက်ရှိသမတ ဦးသိန်းစိန်ပြောတဲ့ ငြိမ်းချိမ်းရေး စကားမျိုး တွေ မစုကြည်ပါးစပ်က ထွက်တာ မကြားဘူး ဘူး။ နိုင်ငံတော်ရဲ ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ရေး အေးချမ်း သာယာ ရေး တွေဟာ မြန်မာပြည်သူအားလုံး အချင်းချင်း သဟဇာတ ဖြစ်မှုပေါ်မှာ တည် တယ် လိုလဲ ယေဘုံယျအားဖြင့် ပြောရလိမ့်မယ် ။
တိုင်းပြည်နဲ. ပြည်သူကိုချစ်မြတ်နိုးလိုမသေမချင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရင်တောင် မဖြစ်နိုင် သူ.အပေါ် အဆိုးဘဲ မြင်လိမ်မယ်. ဒီလူကြီးမသွားသေးဘူးလား လို. အတိုက်အခံတို.က ဆိုကြ လိမ့်မယ် ၊ ၂၀၁၅ ခုမှာ သူဟာ ၇၂ နှစ် ရှိလိမ့် မယ် ။ ဘုရားသွား ကျောင်း သွား အရွယ် ဘဲ။ ထွက်လို. အချိန်ကောင်း နေ.ကောင်းရက်သာဘဲ ။ ဒါကို ဦးသိန်းစိန် သိပုံရတယ် ၊
အရာရာ ကို အတိုက်အခံ လုပ်နေတဲ့ မစုကြည် ကတော့ အဲဒီအချိန်မှာ အသက် ၇၀ ရှိမယ် ။ ဦးသိန်းစိန် မသွားရအောင် ဘာတွေ ဆန်.ကျင်ကန်.ကွက် ဖန်တည်းမှု တွေတော့လုပ်မယ် မထင်ပါဘူး။ ၀မ်းသာလွန်း လို. မျက် ရည်များတောင် လယ်ရှာတယ် ဖြစ်လေအုံးမယ် ၊ မသွားခင်တော့ Last Supper အတူစားကြ လိမ့်မယ် ထင် တယ် ။ ဒါပေမဲ ဦးသိန်းစိန်သွား ရင် သမတရာထူး မရမှာ စိုးရိမ်နေတယ် ၊ မရခဲ့ရင် နှလုံး ရပ်ပြီး မရဏလှိူင်ဂူ အောင်းမလား၊ ရိပ်ကြီးခိုတော့ မလားဘဲ။ ကိုယ်အရွယ် ကိုယ်သိဘို.ကောင်းတယ် ။
မြန်မာနိုငံမှာ ၂၀၁၅ ခုကျရင် ခေါင်းဆောင်ပြောင်းရမှာတော့ သေချာနေပြီ ခေါင်းဆောင်သစ် ဆိုတာမရှိဘူး။ နောက်ခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲ ၊ အဲဒီခေါင်းဆောင်က မြန်မာနိုင်ငံ ပြသနာ တွေကို အုံဖွ ဆိုတဲ့ အုံတလုံးနဲ. ဖြေရှင်း ပြေလည်သွားစေမှာလား။ ဟဲ့ တော်ကြတော်ကြ ပြောမရရင် ကုလား ကြီး ခေါ်လိုက်မယ် သူရဲကြီး ခေါ်လိုက်မယ် ၊ (ပုလိပ်ကြီးရယ် ကိုခွေးကို ဖမ်းသွား စမ်းပါရှင် )လို.ဆိုပြီး အပ်လိုက်မှာလား။
ကမ္ဘာ လှည့်ပြီး အစိုးရနဲ့ ကျမ ဖေဖေတည်ထောင်တာပါ ဆိုတဲ့ တပ်မတော် ကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းမျိုးစုံတွေနဲ့ သိက္ခာချတုန်းဘဲ ၊ တခြားသူတွေကတော့
သူတို ဖေဖေတွေ အကြောင်း ဘာမှမပြောကြဘူး ပြောသံမကြားရဘူး။ ပြောဘို.လဲ မလိုဘူး။ သူတိုဖေဖေတွေ အကြောင်း လူတိုင်းသိတယ် ၊ ပြီခဲ့ တဲ့ သတင်းပါတ်ထဲ မှာ နောက် ဆုံး တယောက် ဦးရဲထွဋ် (ရဲဘော် ၃ ကြိတ်ဝင်/ ကွန်မြုနစ် ဆိုတာ ဆုံးပါးသွား တယ်၊ ) နစ်တာ မနစ်တာ က တခြား ၊ သူလဲ ရဲဘော် ၃ ကြိတ်ဝင် တယောက် ၊ ကျမ ဖေဖေ တယောက်ထဲမဟုတ်ဘူး ဆိုတာ ပေါ်လွင်စေတယ် ။ လူတကာ သိနေတယ်။ ကျမ ဖေဖေကို အခါ အခွင့်သင့်တိုင်း ကြော်ငြာထဲ့ ရတာကလဲ အမော ၊ လယ်သူမှ သူ.ကို ဂုဏ် မချဘူး။ ကိုယ်လုပ်မှ ကျမ ဖေဖေ ဟာ အပေါကြီးဖြစ် တော့မယ်၊ ဖေဖေ သေရတဲ့ ၁၉ ဇူလိုင်က ၁၉၄၇ မှာမှ. ၂ နှစ်နဲ့ ၁ လ သား သမီး အရွယ်က ဖေဖေ. ကို ရိပ်ဖမ်း သံဖမ်းလေး သိခဲ့ရတာကိုဘဲ ဇီဇာချဲ.နေတယ် ၊ သောက်မြင်တောင် ကပ်လာပြီ ၊ (ခွေးကန်ခြင် ရင် ခွေးရှင် မျက်နှာကြည့်) ဆိုထား တာရှိနေလို. ခွေးက ကန်းတက်နေတယ်လို. ပြောတော့မယ်။
ကိုအောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်က ကွန်မြုနစ်တယောက် ကွန်မြူ နစ်ပါတီ တည် ထောင်သူ တ ယောက်ဆိုတာ ကိုတော့ ဘာဖြစ်လို. ထည်.မပြောတာလဲ ၊ သခင်စိုးတို သခင် သန်းထွန်း တိုလဲ့ မမေ့အပ်ပါဘူး။ ရရင်ရ မရရင်ချ ဆိုတာ အဲဒီခေတ်က ပေါ်တဲ့ စကား။့ ကျမ ဖေဖေ အကြောင်း ပြည်.စုံအောင် ပြော လိုက်ရင် ကောင်းတာ ပေါ့. ကျမဖေဖေအကြောင်း ရုပ်ရင် ရိုက်ဘို. စီစဉ်နေတာ ဘာဝမှန်လား ဖြစ်စဉ်မှန်လား ကြားကောင်း ပိရိသတ် ဆွဲကောင်း ဘို. လုပ်ဇါတ်တွေလား ၊ ဘယ်သူတွေကို ခလုတ်တိုက်အုံးမှာလဲ ။ ဖေဖေ့သမီး ဖြစ်တဲ့ ကျမဟာ ကျမလဲ ကွန်မြူနစ်ပါလို. ၀န်ခံရာ ရောက်သွားမှာ မို.လား။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုအောင်ဆန်း တယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိ တယ် ၊ မသိတဲ့ သူ မစုကြည် တယောက်ဘဲ ဒါကိုကြည့်ရင် သူဟာ မိသားစု စိမံကိန်းအတွက် သင့်တော်တဲ့ ပုဂိုလ် ဘဲ ဆိုတာ သိနိုင် တယ် သူများမိသား စုတွေအတွက် မဟုတ်ဘူး သူမိသားစုအတွက် ဘဲ ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် သူ ဘယ် လောက်တောင် တဇောက်ကန်းနိုင်တယ် စီးပွားရေးဒါဏ် ခတ်မှုတွေ ကို ထောက်ခံခြင်း ၊ ထောက်ပံရေး အကူအညီတွေ မပေးဘို.ရင်းနှီူမြုတ်နှံ မှုတွေ မလုပ်ဘို.၊ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ အားမပေးဘို. ပြော ဟော ခဲ့တာတွေ သူမငြင်း နိုင်ပါဘူး။ သူများမိသားစုတွေ စား-၀တ် နေရေး ခက်ခဲအောင် လုပ်ခဲ့တာတွေ သူဟာသူ မမြင် ၊ သူနဲ့သူရဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင် ဟာ အာဏာရရေးအတွက် သူရဲမရဲ စီးနေတယ် ဆိုတာ တွေရတယ် ။ ၀န်းနဲစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ သူ.ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ စစ်သားဟောင်း ကြီး တွေကိထိုင်ပြီး အကြံဥာဏ်ပေး သလိုနဲ သူ.ကို သုံးချနေခဲ့ကြတယ် သူရဲဘော ကြောင်တဲ့ စစ်သား တွေဘဲ ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေ ကို မဟုတ်မဟပ် လုပ်ဇါတ်တွေနဲ့ ဟန်.တားတယ် ၊ နှောက်ယှက်တယ်၊ စစ်တပ်က အာဏာယူထားလို.ဆိုတာအပါအ၀င် အကြောင်းအမျိုး မျိုးပြတယ်. ကဲ အခုတော ဘာတဲ့လဲ အစိုးရဟာ ဘယ် သူတွေလဲ ၊ ဒီလူတွေဘဲ မဟုတ်လား သူတို.ကို နိ်ုင်ငံတကာက ဘာကြောင့် အသိအမှတ် ပြု သလဲ ၊ လိုအပ်တာတွေ ကူညီ ထောက်ပုံနေသလဲ ရင်းနှီး မြုတ် နှံနေသတဲ့ လဲ ?
မစုကြည်ကို လေ့လာကြည့်ရတာ မအေ ( ဒေါ်ခင်ကြည်) ကလဲ မနိ်ုင်လို. လွတ်ထားခဲ့ရ ပုံရှိ တယ်၊ ရိုင်းရိုင်း ပြောရရင် မိမဆုံး မ ဖမဆုံး မ Spoilt child လို.ပြောနိ်ုင်မလား မသိဘူး ။ အများသူငါ ဖေါ်ပြကြတဲ့ မစုကြည် ရဲ့ မိသားစု ဓါတ်ပုံ ဆိုတာတွေမှာ ဒေါ်ခင်ကြည် ပုံကို Michael Aris နဲ့အတူ မတွေ.မိဘူး။ တမင် မထည့်ဘဲ ထားတာ လား။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် လို.တော့ တွေးမိတယ် ။ သားမက်နဲ့ ယောက္ခမ အကြောင်း စကားလုပ်ပြီး မပြော ကြဘူး။ ဘယ်သတင်းစာတွေကမှလဲ ရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ပြီး ဖေါ်မပြတာ အကြောင်း တော.ရှိ လိမ့်မယ် ။
မစုကြည် အနေနဲ.က ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြုပြင်ဘို.အဓိက အားသန်နေ တာ ဒီဥပဒေကို မပြင်ရင် သူ သမတ ဖြစ်နိုင်မဲ့ အခြေ မရှိလို.ဘဲ ။ မြန်မာ သွေး ပါသူ သူ.သားမြေးတွေရဲ့အနာ၈ါတ်ကို ကြို.တင် မစဉ်းစားဘူးလို. တော့လဲ ပြောလို.မရဘူး လေ ။
မှန်ပါတယ် မစုကြည်ကို လေးစားမြတ်နိုးသူတွေ ရှိပါလိမ့်မယ် ၊ အသစ် ဆိုရင် မြန်မာတွေ ကြိုက်ကြပါ တယ် နိုင်ငံခြားဖြစ်ဆိုရင် ချေးကုန်းစက္ကူ တောင် မြန်မာတွေ ကြိုက်ကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်မှာတောင် New broom sweeps clean လို. ပြောထားတယ် ။ တချိန်ထဲမှာဘဲ မစုကြည်ကို ကြည့်လို.မရ၊ မြင်ရင်တောင် အော.ခြင်အန်ခြင်သူတွေ ရှိတယ် ဆိုတာကိုလဲ လက်ခံ ရမယ် ။
ဖတ်မိတာလေးပြောရရင် ၂၀၀၃ ခု နိုဝင်ဘာလက ဆိုဗီယက် ယူနီယံရဲ့ ပြည်နယ်ဟောင်း Georgia မှာ United National Movement က အနောက်အုတ်စု လိုလားသူ Misha Saakashvili ခေါင်း ဆောင်တဲ့ သူ တချို.ဟာ ပါလီမန်ထဲ အတင်းဝင်ပြီး လက်နက်မဲ့ Rose Revolution တရပ် ဆင်နွဲ ပြီး အာဏာသိမ်းခဲ့တယ် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလဲ မဲလိမ်မှုအမျိုး မျိုး နဲ့ သမတရာထူး ၂ သက်တန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ တယ် အနောက် ဖက်အားကိုးနဲ့ ရုရှားကို လက်တဲ့စမ်းတဲ့ " Saakashvili ဟာ ၊ ရုရှားရဲ့ လက်တုန်ပြန်မှုကို အကြီးအကျယ် ခံလိုက်ရ တာမှာ South Ossetia နဲ့ Abkhazia တို.ကိုပါ လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတွေအဖြစ် လက်လွှတ် ပေး ခဲ့ရတယ် ၊ ရုရှားနဲ့လဲ သံတမန်ဆက်သွယ် ရေးပြတ်တောက်ခဲ့တယ် ။ ပြည်သူတရပ်လုံး ကလဲ သခင်အားရ ကျွှန်ပါးဝ တဲ့ Saakashvili ကိ်ု ဆက်ပြီး မထောက်ခံတော့ဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒါမျိုးဖြစ်လိုယ အကြမ်းတွေြုံ့ခဲ့ရဘညူးတယ် . နောင်ကို မဖြစ်နိ်ုင်ဘူးလို. မပြော နိုင်ဘူး ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၇ နှစ်အတွင်း ပြင်ပက နာမည် အမျိုးမျိုးပေးခဲ့တဲ့ ရောင်စုံ တော်လှန်ရေးတွေ မြန်မာနိုငငံမှာ ပေါ် ပေါက်ခဲ့ ပေမဲ့ Gerogia မှာလို ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် တွေတော့ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။
မစုကြည်ဟာ Saakashvili မဟုတ်ဘူးလို.ပြောခြင်ရင် ပြောကြတော့ ၊ Western Trained မဟုတ်ဘူး လို.တော့ မပြောနိုင် ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ Georgia လို. ၃ နိုင်ငံ မက ကွဲသွား နိုင်တယ် ။ မယုံမရှိကြနဲ့ ရည်ရွယ်သူတွေ ရှိနေတယ် ။ဟာ.( မစွန်ူးရင်ကလဲ ရှိ ကန်ဇွန်းခင်း ကလဲ ညိ) ဖြစ်သွား နိ်ုင်တဲ့ အလား အလာတွေ ရှိတယ် ။ Georgia ကို ၃ နိ်ုင်ငံကကွဲသွား စေတာ Saakashvili တာဝန်ဖြစ် တယ် ၊ USSR ကို ကွဲသွားစေတာ Michail Gorbachev ဘဲ ။ မစုကြည်က ဒို.နိင်ငံကို ဘယ်နှ နိုင်ငံ ဖြစ်အောင် ခွဲပြီး ၊ သူသေရင် ဘယ်နိ်ုင်ငံမှာ မြုတ်ပါလို. သေတမ်းစာများ ထားခဲ့အုံးမလဲ ဘဲ။ အလောင်းလု ကြအုံးမှာလား ၊ အင်္ဂလန် လန်ဒန်က St Paul Cathedral ထဲမှာ မြုတ်မှာ တဲ့ လား ?